လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖိုရမ် - Ministry of Education
Date :6October, 2013
October 6, 2013 - 5:24 am | News
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျိုတိုမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ဗဟိုဌာနတွင် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့၌ ကျင်းပသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ (The Science and Technology in Society-STS) ဖိုရမ်အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်သို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shinzo Abe တက်ရောက်၍ အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပြီး အာရှ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အမေရိက၊ သြစတြေးလျတိုက်တို့မှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၊ တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ပါမောက္ခများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်၌ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား သူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်လာကြသော သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ကွန်ရက်သည် ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု လမ်းကြောင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ မီဒီယာနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မှုရှိရေး၊ ၂၁ ရာစုတွင် တက္ကသိုလ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်မှုများ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နလန်ထူမှု နှောင့်နှေး ခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့သည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးပါသော အခက်အခဲပြဿနာများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရေးနှင့် ၂၁ ရာစု သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမူဝါဒဝန်ကြီး H.E. Mr. Ichita Yamamoto နှင့်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ သုတေသနဌာနများအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နယ်ပယ်များ ဆွေးနွေးရေးကိစ္စ သဘောတူညီကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ တက်ရောက်လာကြ သည့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးများနှင့် ပညာသင်စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက “မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနသည် ပညာရေးအဆင့် အတန်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ကျောင်းများကို အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းစသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန်နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ဝန်ကြီးဌာနမှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ကဏ္ဍတွင် သုတေသနဌာနများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပညာသင် စေလွှတ်ရေးကိစ္စမှာ မလုပ်မဖြစ်လုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတွင်းနှင့် ဒေသတွင်း သာယာဝပြောမှုနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံ အပါ အဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက် မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အိုဆာကာတက္ကသိုလ်နှင့် ကျိုတိုတက္ကသိုလ်များသို့သွား ရောက်၍ ပါမောက္ခချုပ်များဖြစ်သော Dr. Toshio HIRANO နှင့် Dr. Hiroshi Matsumoto တို့နှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပညာသင်စေလွှတ်ရေး၊ သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခများ မြန်မာနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များသို့ လာရောက်သင်ကြားပို့ချပေးရေး၊ နှစ်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်သို့ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာစိုးလည်း လိုက်ပါ သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Total Hits : 1141565824